2013-06-30 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Screen Capture - ON Saturday, July 06, 2013 No comments
အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီလိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
What's new in Action! 1.14.1?
Any Video Converter Professional 5.0.7 Full Version
IN Converter - ON Saturday, July 06, 2013 No comments
Any Video Converter Professional 5.0.7 အသစ်ထွက်လာတာလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် သူ့မှာသုံးလို့ ရတာတွေကတော့ အများကြီးပါ ဖေါ်မတ်အားလုံးနီးပါးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေး
ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Format တွေကတော့ သူ့ဆိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်Full Version ဖြစ်အောင် Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Crack file ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ ရသွားပြီဖြစ်လို့ အဆင့်ဆင့်နောက်ပြန်တခုစီ ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီလိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
IN Internet Tools - ON Saturday, July 06, 2013 1 comment
အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် မိမိရဲ့ IP ကို ၀ှက်သုံးချင်သူတွေအတွက် Platinum Hide IP v3.2.9.2 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ...
Platinum Hide IP v3.2.9.2 Full Version
Now,agood solution for you comes out, if you are concerned about you online security. Use Platinum Hide IP to keep your real IP address hidden, surf anonymously, secure all the protocols on your PC, provide full encryption of your activity while working in Internet, and much more
IN Antivirus - ON Saturday, July 06, 2013 No comments
IN Internet Tools - ON Saturday, July 06, 2013 No comments
IDM ရဲ့ Download Speed ကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် IDM Optimizer v.01 ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ
IDM Optimizer ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုကိုအရင်က တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် Internet Download Manager ရဲ့ Download Speed ကို အမြင့်မားဆုံး အနေအထားအထိမြှင့်တင်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ
အခုတော့ နောက်ထပ်ဗားရှင်းအသစ် ထပ်ထွက်လာတာမို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်အရင်ဗားရှင်းနဲ့ မတူတဲ့ အပြင်အဆင်နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်ဒီဗားရှင်းလေးမှာတော့ Proxy Setting ပါထည့်သွင်း
ထားတာကြောင့် ကိုယ့်အတွက်အဆင်အပြေဆုံး Proxy ကို ပြောင်းလည်းပြီး Download ယူနိုင်တာကြောင့်
ဆော့ဝဲကမြှင့်ပေးထားတဲ့ Download Speed အပြင် ကိုယ်သုံးထားတဲ့ Proxy ရဲ့ အင်တာနက်အမြန်နှုန်း ကိုပါ ပေါင်းစပ်ခံစားနိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ Install လုပ်စရာမလိုပဲ ဆော့ဝဲကို သာမာန်အတိုင်း Run ပေးလိုက်ရုံပါပဲ
Button သုံးခုပါဝင်ပြီး Proxy Setting ကတော့ ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ Proxy ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ပါ
Optimize IDM ကတော့ IDM ရဲ့ Download Speed ကို အမြင့်ဆုံးအခြေအနေရောက်အောင်
ပြုပြုပေးပါမယ်Default ကတော့ မူလအခြေအနေအတိုင်းပဲ ပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့ပါကဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ
IN Cleaner, Optimizer - ON Thursday, July 04, 2013 No comments
IN Optimizer - ON Wednesday, July 03, 2013 No comments
Xilisoft YouTube Video Converter 3.5.2 Build 20130701 Final With Patch / Keygen
IN Converter, Downloader - ON Wednesday, July 03, 2013 No comments
Xilisoft YouTube Video Converter ဟာ You Tube ပေါ်က Video တွေကို ပြောင်းပေးရုံသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး YouTube Video တွေကို ဒေါင်းဖို့အတွက် သုံးတာပါ YouTubeVideo တွေကိုတစ်ခါတည်း
ဒေါင်း ၊ တစ်ခါတည်းပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲပါHD video တွေ၊ တစ်ခြား video format အပြင် iPod, iPhone , PSP, Zune, Blackberyy, 3gp စတဲ့ Format များစွာကိုအရည်အသွေးကောင်းကောင်း
ပြောင်းပေးမှာပါ ဒါတင်မက ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိပြီးသား flv တွေကိုလည်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ်YouTube Video တွေကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း ဒေါင်းတတ်သူတွေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ.
Download >>uppit (or) solidfiles (or) dropbox
Xilisoft YouTube Video Converter adalah YouTube video downloader & converter video YouTube untuk men-download video YouTube dari YouTube.com, dan mengkonversi video YouTube ke AVI, MPEG, MP4, 3GP, DivX, XviD. Dengan Xilisoft YouTube Video Converter, Anda dapat dengan mudah men-download dan mengkonversi video YouTube, dan memutarnya pada PSP, iPod, iPhone, Apple TV, Zune, ponsel, dll.
Support downloading YouTube videos by the proxy server set in the program itself.
Provide lots of classified profiles with all the parameters optimized for different multimedia devices.
The built-in browser lists YouTube videos by categories and allows you to search for videos.
Allow you to browse YouTube videos in IE, and directly download and convert YouTube videos from IE right-click menu.
Adjust resolution, video quality, audio quality, channel and more parameters for customization.
Allow you to view tasks in table or icon list, and sort them by file size, name, output format, output path and task status.
AsaYouTube video downloader + converter, it provides the highest speed to download and convert YouTube videos.
Support "Drag and Drop" FLV video files to the main window and directly convert FLV files to AVI, MP4, etc.
Show file info like bit rate, frame rate and sample rate, and rename the downloaded YouTube video file.
Provide several after done actions: shut down, hibernate, stand by, and quit.
IN Burning - ON Wednesday, July 03, 2013 No comments
IN Driver - ON Tuesday, July 02, 2013 No comments
မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် windows ချရတော့မယ်..ဒါပေမယ့် ပြန်တင်တဲ့အခါကျ
တော့ Driver ကမရှိဘူး.... ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံနေရသူတွေအတွက် Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါ
တယ်..မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ Driver တွေအကုန်လုံးကို Backup လုပ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး..Windows ပြန်
တင်ပြီးတဲ့အခါမှာ Restore ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ မိမိကွန်ပျူတာဟာ မူလအတိုင်း Driver အစုံအလင်
တင်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် driver ရှာရမယ့်အလုပ်လျော့နည်းစေအောင်ကူညီပေးမှာပါအောက်မှာ
Changes in Driver Magician 3.8:
Add more devices in driver update database
BurnAware Professional 6.4 Final Full With Crack / Keygen
IN Burning - ON Tuesday, July 02, 2013 No comments
CD/DVD တွေထဲက Data တွေကို Copy ယူပြီး ပြန် Burn တာ၊ ISO Image ဖိုင်
တွေအဖြစ် Backup လုပ်ချင်သူများအတွက် စုံလင်တဲ့ Tools တွေနဲ့ ဒီကောင်လေးကို
မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ် Keygen ထည့်မယ်ဆိုရင် အင်တာနက် Connection အရင်
EASEUS Partition Master 9.2.2 Professional Full With Patch
IN Utilities - ON Monday, July 01, 2013 No comments
Hard Disk တွေရဲ့ Partition တွေကို စိတ်ကြိုက်စီမံနိုင်တဲ့ EASEUS Partition Master 9.2.2 Professional Edition ဖြစ်ပါတယ် Partition တွေကိုပေါင်းမှာလား၊ခွဲထုတ်မှာလာအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ် Windows System ရှိတဲ့ Partition ကို XP မှာ Shrank လုပ်ခွင့်မရပါဘူးဒီကောင်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ် Windows7မှာတော့ Shrank စနစ်ပါဝင်ပေးမယ့် Marge လုပ်တဲ့အခါ နည်းနည်း error ရှိပါတယ်
ဒီကောင်က အဲဒီ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်Windows 2000 / XP / Vista / Windows7(both x86, and x64) တွေကို Support ပေးပါတယ်လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ...
EASEUS Partition Master is an all-in-one to work with partitions and disks. The program will allow you to extendasystem partition, to solve problems with insufficient disk space, as well as to manage the free space on the MBR and GPT disks, where the operating system Windows 2000 / XP / Vista / Windows7(both x86, and x64). The program includes several tools for working with partitions: Partition Manager, the Master Copy disks and partitions and partition recovery wizard. In addition, you can createabootable CD / DVD drives in the event ofafailed system boot.
AnyToISO Converter Professional 3.5 Build 455 Full With Patch
IN Converter - ON Monday, July 01, 2013 No comments
Any To ISO Conterter Pro ကဆိုရင် မည်သည့် File , VCD, DVD ကိုမဆို ISO Image အဖြစ် အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်တဲ့Software လေးဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်
IN Uninstaller - ON Monday, July 01, 2013 No comments
ဖြုတ်လို့မရ. လုပ်လို့မရ ပေကပ်ကပ် ဖြစ်နေတဲ့ Software တွေကို ပြုတ်ပစ်ဖို့အတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ Total Uninstall Pro 6.3.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် တော်ရုံနဲ့ ထုတ်မရ,ဖြုတ်မရတဲ့ Program,Software
တွေကို အလွယ်တကူအပြီးအပိုင် ဖြုတ်,ထုတ် ပေးနိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာရှိသူတိုင်းလည်း ဆောင်ထား
သင့်တဲ့ Software လေးပါပဲ
Copy the two files "License.dat" & "Program Options.xml" to the installation folder.
Disable you internet connection.
Register the program with the key provided.
IN Speed up window - ON Sunday, June 30, 2013 No comments
မိမိတို့ ကွန်ပြူတာမှာ ဖရို ဖရဲ ဖြစ်နေတဲ့ Files တွေကို စနစ်တကျ ပြန်စီပေးတဲ့ Freeware လေးပါ ... Files တွေကို မကြာခဏ ပြန်စီပေးခြင်းဖြင့် ကွန်ပြူတာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း မြန်ဆန်လာမှာပါ ...။
IN Utilities - ON Sunday, June 30, 2013 No comments
ကျွန်တော်တို့ ၀င်းဒိုး မှာပါလာတဲ့ အသင့်သုံး ကော်ပီနဲ့ကူးနေကြတာ ဖိုင်ဆိုဒ်သေးရင်တော့ သိပ် ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတွေ ကို ကူးတဲ့အခါကျတော့ ကိစ္စရှိလာပြီ... ဒီကိစ္စကို ExtremeCopy 2.3.3 PRO နဲ့ အကူအညီယူနိုင်ပါတယ်.... 32 အတွက်ရော 64 အတွက်ပါ တင်ပေးထားပါတယ် Serial တင်ပေးထား
Download>>>dropbox (or) solidfiles (or) uppit
ExtremeCopy -aprogram that allows you to significantly improve the performance of operations to copy files and folders on Windows. According to the manufacturer, the application will move and copy files toa20-120% faster than is possible by means of its own.
Extremely fast copying and moving files
The possibility of setting upaprocess to pause and later resume
Calculation and display the exact time remaining until the end of the copy
If you find problems in the copy or move the file (for example, in the case of blocking the desired object), the application will suspend the process and continue copying after the elimination of obstacles arising